20 000 taonina famokarana zezika voajanahary - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny zezika biolojika dia zezika vita amin'ny biby fiompy sy akoho amam-borona ary fako avy amin'ny fermentation ny hafanana be, izay tena mandaitra amin'ny fanatsarana ny tany sy ny fitrohana ny zezika. Ny zezika biolojika dia azo amboarina amin'ny residana metana, fako fambolena, zezika sy zezika akoho amam-borona ary fako monisipaly. Ireo fako biolojika ireo dia mila karakaraina bebe kokoa alohan'ny hamadihana azy ireo ho zezika biolojika ara-barotra lafo amidy.
Ny fampiasam-bola amin'ny famadihana ny fako ho harena dia tena mendrika tokoa.
Telefaona: + 86-13901833873
Ny tsipika famokarana zezika biolojika dia mizara ho fiterahana sy fitomboan'ny ala.
Ny fitaovana lehibe indrindra amin'ny dingana pretreatment dia ny milina miolakolaka. Amin'izao fotoana izao dia misy mpanalalana telo lehibe: dumper groaced, dumper mandeha ary dumper hydraulic. Samy manana ny mampiavaka azy izy ireo ary azo voafantina arakaraka ny tena filàna.
Raha ny momba ny teknolojia granulation dia manana granulator isan-karazany isika, toy ny granulator drum rotary, granulator manokana ho an'ny zezika organika vaovao, gran granatera, granulator extrusion helix indroa, sns. Afaka mamaly ny fangatahana zezika biolojika be zotram-bolo sy malala-tanana izy ireo. famokarana.
Izahay dia mikendry ny hanome ny mpanjifa tsipika famokarana tsara kokoa sy sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, izay afaka manangona tsipika famokarana zezika biolojika miaraka amin'ny 20 000 taonina, 30.000 taonina, na 50 000 taonina na fahaizan'ny famokarana mifanaraka amin'ny tinady famokarana.
2. Fako indostrialy: voaloboka, vinaingitra vinaingitra, reside mangahazo, reside siramamy, fako biogas, sisa tavela amin'ny volony, sns.
5. Sludge: fotaka an-tanàn-dehibe, fotaka amin'ny renirano, fotaka fanivanana sns.
Ny tsipika famokarana zezika biolojika dia misy dumper, crusher, mixer, milina granulation, soloina, milina fampangatsiahana, milina fitiliana, fonosana, milina fonosana mandeha ho azy ary fitaovana hafa.
►Tombony azo avy amin'ny tontolo iainana
Tsipika famokarana zezika biolojika miaraka amin'ny vokatra 20.000 taonina isan-taona, maka ohatra ny dikin'ny biby fiompy, ny haavon'ny fitsaboana fako isan-taona dia mety hahatratra 80.000 metatra toratelo.
►Fanarenana loharano azo tanterahina
Raiso ho ohatra ny zezika sy ny vorona akoho amam-borona, ny fako kisoa isan-taona ampiarahina amin'ny mpananana vokatra hafa dia afaka mamokatra zezika biolojika 2 000 ka hatramin'ny 2.500 kilao, izay misy 11% ka hatramin'ny 12% zava-boahary (azota 0,45%, 0,19% pentofokisôsy phosphore, 0,6 % potassium chloride, sns.), izay afaka manome fahafaham-po ny iray acre. Fangatahana zezika ho an'ny akora an-tsaha mandritra ny taona.
Ny sombin'ny zezika biolojika novokarina tao amin'ny tsipika famokarana zezika organika dia manan-karena azota, phosforus, potasioma ary otrikaina hafa, miaraka amin'ny atiny mihoatra ny 6%. Ny atiny voajanahary dia mihoatra ny 35%, izay avo kokoa noho ny fenitra nasionaly.
►Tombony lehibe azo amin'ny toekarena
Ny tsipika famokarana zezika biolojika dia be mpampiasa amin'ny tanimboly, hazo fihinam-boa, greening zaridaina, ahitra avo lenta, fanatsarana ny tany ary saha hafa, izay afaka mamaly ny fangatahana zezika biolojika amin'ny tsena eo an-toerana sy manodidina, ary mamokatra tombony ara-toekarena tsara.
Ny fanamasinana ireo akora biolojika biolojika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizotry ny famokarana zezika biolojika. Ny fermentation feno no fototry ny famokarana zezika biolojika avo lenta. Samy manana ny tombony azony ireo mpanaparitaka voalaza etsy ambony. Ny mpitrandraka hydraulic sy groove dia afaka mahatratra fermentation feno composting, ary afaka mahazo stacking sy fermentation avo lenta, miaraka amin'ny fahaizan'ny famokarana. Ny dumper dumper sy milina fitifirana hydraulic dia mety amin'ny karazana akora biolojika rehetra, izay afaka miasa malalaka ao anaty sy ivelan'ny orinasa, manatsara be ny hafainganan'ny fermentation aerobic.
Crusher fitaovana mando semi-wet novokarin'ny orinasa misy anay dia karazana crusher tokana mahomby be, izay azo ovaina be amin'ny akora biolojika misy atiny feno rano. Ny crusher vita amin'ny semi-mando dia be mpampiasa amin'ny famokarana zezika biolojika, izay misy vokany tsara amin'ny akora mando toy ny zezika akoho sy maloto. Ny grinder dia mampihena be ny tsingerin'ny famokarana zezika biolojika ary mitsitsy ny vidin'ny famokarana.
Rehefa avy potipotehina ny akora, afangaro amin'ny fitaovana fanampiana hafa ary ahetsiketsika tsara mba hanao granulation. Ny mixer marindrano-axis roa dia matetika ampiasaina amin'ny alohan'ny hidiran'ny rano sy ny fampifangaroana ireo vovoka. Ny tadin'ny spiral dia misy zoro maro. Na inona na inona ny endrika, ny habeny ary ny hakitroky ny lelany, dia azo afangaro vetivety sy tsy miova ny akora.
Ny fizotry ny granulation no ampahany lehibe amin'ny tsipika famokarana zezika organika. Ny granulator zezika biolojika vaovao dia mahatratra granulation fanamiana avo lenta amin'ny alàlan'ny fanetsiketsehana, fifandonana, mozika, sphericalization, granulation ary fizotran'ny dity, ary ny fahadiovan'ny organika dia mety hahatratra 100%.
5. Maina sy mangatsiaka
Ny fanamainana roller dia manaparitaka hatrany ny loharano hafanana ao amin'ny fatana rivotra mafana amin'ny toeran'ny orona mankany amin'ny rambon'ny motera amin'ny alàlan'ny fanaka napetraka eo amin'ny rambon'ny masinina, mba hifandraisana tanteraka amin'ny rivotra mafana sy hampihena ny rano ny fitaovana atin'ny sombintsombiny.
Ny cooler roller dia mampangatsiaka poti amin'ny maripana sasany aorian'ny fanamainana. Raha mampihena ny maripanan'ny sombin-javatra, ny atin'ny rano ao amin'ny sombintsombiny azo ahena indray, ary manodidina ny 3% ny rano azo esorina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny famafana.
Aorian'ny fampangatsiahana dia mbola misy akora vovoka ihany koa amin'ny vokatra vita amin'ny sombiny. Ny vovoka rehetra sy ny sombin-javatra tsy mendrika dia azo alefa amin'ny sivana sivana. Avy eo, dia entina avy any amin'ny conveyor fehikibo mankany amin'ny blender ary ahetsiketsika mba hanaovana granulation. Ireo poti-javatra lehibe tsy mendrika dia mila torotoro alohan'ny granulation. Ny vokatra vita dia entina mankany amin'ny milina famonoana zezika organika.
Ity no dingana famokarana farany. Ny milina fonosana feno automatique tanteraka novokarin'ny orinasanay dia masinina fonosana mandeha ho azy izay natao manokana sy novokarina ho an'ny sombintsombin'ny endrika samihafa. Ny rafitra fanaraha-maso mavesatra dia mahafeno ny fepetra takian'ny vovoka sy tantera-drano, ary afaka manamboatra ny boaty ara-materialy mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa ihany koa. Mety amin'ny fonosana akora betsaka, azo atao milanja, mampita ary manisy tombo-kase azy ho azy.